सुष्मा र नवराजकाे फोन बार्ता भन्दै बाहिरियो यस्तो भिडियो! के यो साँचो हाे? (अडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सुष्मा र नवराजकाे फोन बार्ता भन्दै बाहिरियो यस्तो भिडियो! के यो साँचो हाे? (अडियो सहित)
admin May 31, 2020 भिडियो, समाज 0
नवराज र सुस्माको कल रेकर्ड यस्तो – सुस्माले रुदै भनेका थिईन, दाई PLZ एक पटक नबराजलाई फोन दिनुहोस्प्रेमिकालाई घर भित्र्याउने सपना साँचेका उनी भेरी त तरे तर प्रेमिकाको हात समाएर घर फर्कन पाएनन् । आफ्ना पाँच साथीसहित उनी भेरीमै विलिन भए ।२०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँकी ती किशोरीले नवराज विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरिन् ।
आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन् । नवराजले १९ जना साथीहरूलाई साताअघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग मागेका थिए । तर पछिल्लो म्यासेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य भएन ।
भिडियो बार्तामा भएकाे कुराकानी सुन्दा सुस्माकाे आवाज जस्तो लाग्दैन र नवराजकाे पनि तर सामाजिक सञ्जाल र यूट्युवमा समेत यो भिडियो बाहिरिएसँगै भाइरल नै बनेका छ ।
‘होटेल जान्छु’ भनेर हिडेको श्रीमान ६ महिनादेखि हराए, श्रीमति रुदै आईन् ! बुहारीको यस्तो आरोप (भिडियो हेर्नुहोस)